Teny ierana hanompo vahoaka - Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia
Publié novembre 14, 2019 par Book News
Notontosaina omaly 12 novambra 2019 ny fanaovan-tsonia ofisialin’ny « Teny ierana hanompo vahoaka » natao ho an’ireo Kandidà Ben’ny Tanàna sy Kandidà Mpanolontsainan’ny Kaomina eto Antananarivo Renivohitra.
Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy nanao Sonia ny Teny ierana hanompo vahoaka
Kandidà Ben’ny tanàna telo amin’ny dimy no tonga nanao sonia ny “Teny ierana hanompo vahoaka”, omaly, teny Ambatonakanga, dia i:
Ralaiarimanana Eliace: Kandidà laharana 1,
Rakotoarisoa Faniry Alban: Kandidà laharana 3,
Naina Andriantsitohaina: kandidà laharana 4
Ireo Kandidà Ben’ny Tanàna 3 nanao sonia ny Teny ierana hanompo vahoaka. cc: Rohy
Momba ny Kandida Mpanolotsaina kosa indray, efatra amin’ny dimy ny solontena avy amin’ny lisitry ny mpanolontsainan’ny Kaominina no tonga ary nanao sonia : dia ny Lisitra Lalatiana Ravololomana (izay efa nanaiky nanao sonia tamin’ny 5 Novambra, andro nanombohana ny fampielezan-kevitra), ny Lisitra Komba, ny Lisitra Tina Laurence Randrianantoandro, ary ny lisitra IRK.
Nanatrika ny fanaovan-tsonia ihany koa ny Kandida Ben’ny tanàna sy Mpanolotsaina avy amin’ny Kaominina Andoharanofotsy : Andriamalala Anaclet sy Rakotondranaivo Honoré Pascal.
Marihina fa ny Kandidà te hanao sonia eny amin’ny toerany dia raisina eo anivon’ny ratsamangaikan’ny CED ary ny Alatsinainy 25 Novambra no fetra hanaovana izany.
Vonona ny hanaja ny teny nomeny izy ireo matoa nanao sonia izao Teny Ierana izao raha ny voalazany.
“Ahafahana mahita taratra sahady izay kandidà vonona ny hijery ny tombontsoan’ny vahoaka izao fanaovana sonia izao », hoy ireo kandidà teny an-toerana, omaly.
Ny « Teny Ierana Hanompo Vahoaka »
Ny « Teny Ierana Hanompo Vahoaka » dia sata novolavolain’ny Komity Iombonana ahitana ny rafi-panjakana (CENI, CFM, HCDDED, CNIDH, CSI, SAMIFIN), sy ny fikambanan’ny Fiarahamonimpirenena (Rohy, Safidy, Chaine d’honnêteté, TI-IM).
Fepetra voasoratry ny lalàna, mamaritra ny fitondrantenan’ny mpilatsaka ho fidiana, mialoha, mandritra, ary aorian’ny fifidianana, no nadika ary noraketina ao anatin’io Teny Ierana io. Hahazoana fifidianana tomombana sy eken’ny rehetra no tanjona raha tsiahivina.
Notanterahina omaly teny Ambatonakanaga ny fanaovan-tsonia ny Teny ierana hanompo vahoaka. cc: Rohy
Tahaka ny nataon’ny kaomity iombonana tamin’ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka, hisy hatrany ny fanaraha-maso sy ny tatitra ho atao mikasika ny fampiharana io Teny Ierana io. Ahafahan’ny mpifidy mahafantatra misimisy kokoa ireo kandidà izany ary ahafahana mamaritra ny fanatanterahana ny fampanantenana ataon’ireo izay ho lany.